LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်နံရံဝယ်ယူမှုများအတွက်လမ်းညွှန်လက်စွဲစာအုပ် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း, LED ဗီဒီယိုနံရံကပ်ကြော်ငြာမျက်နှာပြင်သည် ပို၍ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်. ကျနော်တို့ LED ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်ဝယ်ယူတဲ့အခါ, ကစကေးစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်, စံ, စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု့, ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် LED ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်၏အခြားအချက်များ. အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ကတော့ LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတာပါ.
. အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ယူနစ် template ကိုအရွယ်အစား (မိုးလုံလေလုံမျက်နှာပြင်) သို့မဟုတ် pixel အရွယ်အစား (အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်)
အထွေထွေ LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏ resolution သည် 768 လိုင်း× 1024 ကော်လံ. အထူးအီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်သည်ဤကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နိုင်သည်. ဘုံနည်းလမ်းနှစ်ခုဖန်သားပြင်ပေါင်းစပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်; အခြားတစ်ခုမှာဆားကစ်ကိုစီစဉ်ရန်အလွန်မြန်သောမြန်နှုန်းမြင့်ချစ်ပ်ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုမြင့်မားသည်.
မျက်နှာပြင်၏အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအကြောင်းကိုပါ 2.0 မီတာ (အမြင့်) ×3မီတာ
မျက်နှာပြင်အကျယ်ဆုံးအရွယ်အစားသည် ၂.၅ မီတာခန့်ရှိသည် (အမြင့်) × 4m
မျက်နှာပြင်၏အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအကြောင်းကိုပါ 3.7 မီတာ (အမြင့်) ×6မီတာ
မိုးလုံလေလုံအီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်အများအပြားအကြေးခွံစီစဉ်အခါ, ကအီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ယူနစ် template ကို၏စကေးအပေါ်အခြေခံပြီးရပါမည်. ဆဲလ် template ၏ resolution ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ် 32 အတန်း× 80 ကော်လံ, ဒါက, ရှိပါတယ် 2048 စုစုပေါင်း pixels ကို, အောက်ပါအတိုင်းနှင့်၎င်း၏အများအပြားအကြေးခွံဖြစ်ကြသည်:
3.75mm ယူနစ်ပုံသဏ္unitာန်၏အတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ် 153 မီလီမီတာ (အမြင့်) × 306 မီလီမီတာ (width)
of ၏ရှုထောင့်5မီလီမီတာယူနစ် formwork ဖြစ်ပါတယ် 244 မီလီမီတာ (အမြင့်) × 488 မီလီမီတာ (width)
အတွင်းပိုင်းအီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏ပြင်ပဘောင်၏အရွယ်အစားကိုတောင်းဆိုချက်အရဆုံးဖြတ်နိုင်သည်, ယေဘုယျအားဖြင့် screen အရွယ်အစားနှင့်အညီဖြစ်သင့်သည်. ပြင်ပဘောင်၏အရွယ်အစားသည်ယေဘုယျအားဖြင့် 4cm-10cm ဖြစ်သည် (တစ် ဦး ချင်းစီဘက်).
အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်သည်, pixel scale ကိုအရင်ဆုံးဖြတ်သင့်သည်. The selection of pixel scale should not only consider the demand of display content and space elements mentioned above, but also consider the equipment orientation and sight distance. If the equipment orientation is further away from the main line of sight, the pixel scale should be larger. Because the larger the pixel size, the more luminous tubes are in the pixel, the higher the brightness, and the farther the useful sight distance is. သို့သော်, the larger the pixel scale, ယူနစ်perရိယာနှုန်း pixel resolution ကိုအနိမ့်နှင့်ပြသခံရဖို့အကြောင်းအရာလျော့နည်း.
LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုတူညီသောစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်အများဆုံးစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုခွဲခြားထားသည်. ယူနီဖောင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု, ထို့အပြင်စစ်ဆင်ရေးပါဝါစားသုံးမှုအဖြစ်လူသိများ, ပုံမှန်အလေ့အကျင့်ပါဝါစားသုံးမှုဖြစ်ပါတယ်. အမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုသည်မီးစတင်သောအခါ (သို့) အလင်းပြည့်သောအခါစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုဖြစ်သည်, စသည်တို့, နှင့်အများဆုံးပါဝါစားသုံးမှု AC ပါဝါထောက်ပံ့ရေးများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ် (ဝါယာကြိုးအချင်း, switch သည်, စသည်တို့) ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်
ယူနီဖောင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှု: 200W / m2; အများဆုံးပါဝါစားသုံးမှု: 450W / m2, φ ၃.၇၅mm အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင် = consumption ၅ မီလီမီတာအီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်ပါဝါစားသုံးမှု× 2.5 ကြိမ်. အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်သည်အကြီးစားအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်သက်ဆိုင်သည်. ဘေးကင်းလုံခြုံလည်ပတ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးသည်, ယင်း၏ AC220V ပါဝါ input ကို terminal ကိုသို့မဟုတ်ချိတ်ဆက် microcomputer ၏ AC220V ပါဝါ input ကိုအဆုံး grounded ရမည်ဖြစ်သည်.
LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်နိမိတ်လက္ခဏာ၏ Brightness control method
စမတ်မြို့သည်ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်အတွက် LED မီးတိုင်တိုင်မျက်နှာပြင်လိုအပ်သည်